D,F,S oo hirgalisay xarunta ka digista musiibooyinka dalka - Awdinle Online
D,F,S oo hirgalisay xarunta ka digista musiibooyinka dalka
Khubarada ayaa rumeysan in hirgalinta xaruntan ay wax weyn ka tareyso yareynta saameynta musiibooyinka ku yeeshaan goballada iyo degmooyinka dalka.
“Diyaarinta iyo hirgalinta xarunta kaliya kuma saabsana adeeg cusub oo la helay, hase yeeshee waxey tallaabo loo qaaday xoojinta madaxbannaanida iyo qarannimada Soomaaliy. Annaga oo adeegsaneyna xurntaan, waxaan awood u yeelan doonnaa in innaga gacanta ku heyno xogto cimilada iyo macluumaadka la xiriiro ee dalka.” Ayuu yiri Xamsa Saciid Xamsa Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka DFS.
Sadaasha iyo la socodka halis wadareedka ayaa xaruntan ka hor bixinayay hey’ado raacsan qaramada midoobay.
Previous articleAntonio Gutters ayaa ka hadlay dhibaatooyinka laga dhaxlay Covid-19
Next articleJaamacadda Carabta wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland Soo dhoweySay